एभरेष्ट चीनी उद्योगले विद्युत उत्पादन शुरु गर्यो « Lokpath
२०७७, १४ माघ बुधबार ०६:२०
प्रकाशित मिति : २०७७, १४ माघ बुधबार ०६:२०
काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालित चिनी उद्योगमध्ये पहिलोपटक एभरेस्ट सुगर मिल्स तथा केमिकल इन्डस्ट्रिजले को–जेनेरेशनका रूपमा विद्युत् उत्पादन शुरू गरेको छ । महोत्तरीस्थित उक्त चिनी मिल्सले परीक्षणका लागि उत्पादन गरेको विद्युत् सोमवारदेखि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्राविधिक टोली र उद्योगका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा सोमवारदेखि १ हप्ताका लागि परीक्षण उत्पादन शुरू गरिएको हो । १ हप्तापछि भने व्यावसायिक रूपमै विद्युत् उत्पादन शुरू हुने एभरेस्ट सुगर मिल्सका कार्यकारी निर्देशक सरेस सर्राफले बताए ।
उक्त उद्योगबाट उत्पादित विद्युत् प्राधिकरणको औराही सबस्टेशनमा जोडिएको हो । सबस्टेशन र उद्योगबीचको दूरी भने १२ किलोमीटर छ । यससँगै चिनी उद्योगबाट प्राधिकरणलाई विद्युत् विक्री गर्ने एभरेस्ट सुगर मिल्स पहिलो चिनी मिल बनेको छ ।
उक्त उद्योगले ३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी गत पुस ८ गते विद्युत् विकास विभागबाट उत्पादनको अनुमतिपत्र लिएको थियो । यद्यपि अनुमतिपत्र अनुसार हाल ३ मेगावाट विद्युत् नै उत्पादन भएको छैन । अहिले करीब २ मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन भइरहेको कार्यकारी निर्देशक सर्राफले बताए । आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।
ओली समूहले संसद अवरुद्ध पार्ला ?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहले आफ्नो दललाई प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गर्ने
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले आफूलाई थुनामा पठाउने
काठमाडौं । चौतर्फी दबाब र आलोचना खेपिरहेको निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिकताको विवाद टुग्याउन
ओली समूहको रणनीति के ?
काठमाडौँ । नेकपा ओली समूहले आफ्नो पक्षमा बहुमत सांसद जुटाएर अविश्वास प्रस्ताव विफल